कहिले काहीं नितीशास्त्रका कुरा पढ्न छुट्टै आनन्द आउंछ। कुनै बेला एक जना साथीले नेपालबाट आउणदा चाण्यक्य निति ल्याएका थिए। यसो हेरेको राम्रो लाग्यो। तदपस्सात नियामित पढ्न थाले। पढ्ने क्रममा एक पटक एक जना भाउजु चाण्यक्क नितिको निकै बिरोध गरिन। किन भनेर सोधेको त चाण्यक्क निति महिला माथी निकै क्रुर भएको बताउनुभयो। मैले पुरै त पढिन तर महिला माथि त्यस्तो शब्द लेखेको मैले पढे जतिमा भेटिएन। हिजो पुरुष्तोम जी ले चाण्यक्य नितिका २ निति पठाउनु भएको रहेछ, त्यसले मलाइ मैले पहिले पढेका कुरा सम्झाए। मैले पढे जतीमा मन परेका ५ निति:
१) सदकर्म: राम्रो कामले मान्छे इश्वर बनाउंछ भने खराब कामले मान्छेलाइ रा्क्षस तुल्लाउंछ। राम्रो बिचारले मान्छेलाइ सधै सफलता तिर पुर्राउंछ भने खराब बिचारले मानिसलाइ बिनाशतिर पुर्याउंछ।
२) आलश्य: आलश्य मान्छेको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। यसले केही प्राप्त गर्न अक्षम मात्र बनाउदैन पाएको पनि गुमाने स्थितीमा पुर्राउनसक्छ।
३) मुर्खता: मुर्खले आफ्नो असफलतमा कि आफैमा पछुतो मनाउछन या अरुलाई दोष लगाउंछन। मुर्खले अरुलाइ नाष गर्ने खोज्दा आफै नाशित हुन पुग्दछन। राम्रो ज्ञानले मान्छेलाइ मुर्खहुनबाट जोगाउंछ।
४) इक्षा: इक्षाले मान्छेलाइ दास बनाउदछ। जस्ले आफ्नो इक्षालाइ बसमा ल्याउंछ, त्सले संसारलाइ नै बषमा ल्याउन सक्दछ। इक्षाको निम्ती गलत काम गरदा समाप्ती तिरै पुर्याउंछ।
५) स्वभाव: यदी शिक्षित मानिसले आफुलाइ प्रभाव पार्न सक्दैन भने त्यसले अरुलाइ पनि प्रभाव पार्न सक्देन। मान्छे जो सत्यबाट टाढा रहन्छ त्यसको कुनै असतित्व हुदैन।
अब भने पुरुषोत्तमजीको पालो। वांहालाइ निकै मार्मिक लागेक दुइ चाणक्य निति:
-कुन बेलामा के गर्नु पर्छ । देस कुन हो लाभ के छ ? अर्थात ब्याय के छ ? म कहाँ छु । ममा के सामर्त्य छ । भोली म के गर्न सक्छु ? मित्र कुन हो ? मेरो कर्तब्य के हो ? भन्ने कुरा मा मानिसले बारम्बार बिचार पुर्यायन भने केवल त्यो यस ब्रमाण्डमा मर्नको लागि मात्र जन्म लियको हो ।